လွင်ပြင်စီးကရက် packets တွေကိုအားဖြင့်မိတ်ဆက်နိုင် 2015 - သတင်း Rule
လွင်ပြင်စီးကရက် packets တွေကိုအားဖြင့်မိတ်ဆက်နိုင် 2015
စီးကရက်ကနေဗြိတိန်မှာလွင်ပြင် packets တွေကိုရောင်းချနိုင် 2015 အစိုးရအဆေးလိပ်သောက်တက်ယူပြီးအထဲကလူငယ်တွေရပ်တန့်ရည်ရွယ်မူဝါဒပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ကြာသပတေးနေ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်.
အငယ်တန်းကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဂျိန်း Ellison လွင်ပြင်ထုပ်ပိုးအပေါ်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုလွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်မတ်လကဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်.
အစိုးရကဗြိတိန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကနေပေါ်ထွက်လာအဖြစ် branded ထုပ်ပိုးအပေါ်မည်သည့်တားမြစ်ချက်စေခြင်းငှါဆေးရွက်ကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အပေါ်သက်ရောက်မှုစိတ်ပူဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်.
“ငါအချိန်စံချိန်စံညွှန်းမီထုပ်ပိုးများ၏နိဒါန်းအများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်ဖြစ်စေအပေါ်လွတ်လပ်သောအမြင်ရှာအံ့သောငှါမှန်သည်ယုံကြည်. အထူးသဖြင့်, ငါလူငယ်များအပေါ်ဖွယ်ရှိသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သိလိုကြသည်။”
ဒီဇင်ဘာလ၌သြစတြေးလျသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တူညီအတွက်စီးကရက်ရောင်းဖို့ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီအတင်းမှကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်လာခဲ့သည်, သံလွင်စိမ်း packets တွေကိုတူညီတဲ့ typeface သည်းခံခြင်းနှင့်အကြီးအကျယ်ဂရပ်ဖစ်ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်နဲ့ဖုံးလွှမ်း.
ကနျြးမာရေးအလှူအတန်းဗြိတိန်မှာအလားတူပြောင်းရွှေ့ဘို့ခဲယဉ်းတွန်းကြပြီ, ရောင်စုံ branded packets တွေကိုတစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဆေးလိပ်သောက်ကြည့်ဖို့လူငယ်တွေကိုအားပေးတျောသညျ.
ဒါကြောင့်လာမယ့်လရှင်များ ဟူ. ၏အထက်အောက်လွှတ်တော်အတွက်လွင်ပြင်ထုပ်ပိုးအပေါ်တစ်ဦးမဲပေးဆုံးရှုံးဖို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အတိုက်အခံအလုပ်သမားပါတီပြန်လည်သုံးသပ်မိန့်၏ကင်မရွန်ရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရစွပ်စွဲ.
“ဒီတစ်ခုအဖြစ် shambolic တစ်ခုသာအစိုးရယခုတစ် u-အလှည့်အပေါ် u-လှည့်နိုင်,” အလုပ်သမားရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Luciana Berger ကပြောပါတယ်.
“စံချိန်မီထုပ်ပိုးလူငယ်တွေကိုစီးကရက်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုစေသည်. အခုကျွန်တော်တို့ legislating ရပါမည်, delay လုပ်ခြင်းမဟုတ်။”
branded ထုပ်ပိုးအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုရွှေ့ဆိုင်းအခါကင်မရွန်ဇူလိုင်လမှာမီးအောက်မှာ လာ. ,, အတိုက်အခံအမတ်များဆုံးဖြတ်ချက်သည်မိမိအကြီးအကဲပါတီမဟာဗျူဟာနှင့်ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီတွေအကြားလင့်များကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဖြစ်စေတောင်းနှင့်အတူ.
Lynton Crosby သည်, ကင်မရွန်ရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီများအတွက်သြစတြေးလျ strategist, ယခင်ကသြစတြေးလျ၌ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆန့်ကျင်ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီများအတွက်ပွုတျောမူခဲ့တဲ့လူထုဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီပြေး.
ကင်မရွန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Crosby သည်နှင့်နှောင့်နှေးအကြားမည်သည့်လင့်ခ်ရှိ၏ငွငျး.
ဤဆောင်ပါး, လွင်ပြင်စီးကရက် packets တွေကိုအားဖြင့်မိတ်ဆက်နိုင် 2015, ကအေအက်ဖ်ပီကနေစုစည်းတင်ဆက်သည်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ဝဘ်ဖြတ်ပြီး Related ဆောင်းပါးများ
အကြမ်းပုံ: တစ်ဦး fag packet ကို၏နောက်ကျောအပေါ်စိတ်ကူးတစ်ခု
လွင်ပြင် packet ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စာရေးဆရာမ '' ဆေးရွက်ကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းမှမ link ကို’
← မင်းသားဟယ်ရီအန္တာတိကဒါန Trek စဉ်အတွင်းတစ်လိမ့်ကျခြင်းယူ အားကစားပိုက်ကွန်ထဲမှာ steroids အသစ်စမ်းသပ် 260 လက္ခဏာ →